५२ लाख रुपैयाँ पर्ने ‘स्कोडा र्‍यापिड’ गाडी अब १० लाखमै किन्न पाइने
स्कोडा र्‍यापिड टीएसइआई अब १० लाख रुपैयाँ डाउपेमेन्टमा खरिद गर्न सकिने भएको छ । युरोपेली कार ब्रान्ड स्कोडाको नेपालीका लागि आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यस्तो सुविधा ल्याएको हो ।
सोमवार, मंसिर ६, २०७८ १२:३७
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। स्कोडा र्‍यापिड टीएसइआई अब १० लाख रुपैयाँ डाउपेमेन्टमा खरिद गर्न सकिने भएको छ । युरोपेली कार ब्रान्ड स्कोडाको नेपालीका लागि आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यस्तो सुविधा ल्याएको हो ।
यो १.० लिटर, थ्री सिलिण्डर र ९९९ सीसी डीसप्लेसमेन्ट रहेको गाडी हो । स्कोडा र्‍यापिड टीएसआई नेपालमा विभिन्न ६ भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको छ । यसको व्हीलबेस २५५२ एमएम, फ्यूल ट्यांक क्षमता ५५ लिटर रहेको छ । यसको माइलेज प्रतिलिटर १८.९७ किलोमिटर रहेको छ । सुरक्षा प्रणाली पनि एयरब्याज, एबीएस र ईबीडी रहेको छ । यो गाडीको सीट क्षमता ५ जना रहेको छ ।
यसको ग्राउन्ड क्लिरियन्स १६३ देखि १७३ एमएम रहेको छ । यसको उच्च गति ८५ प्र्रतिघण्ट १८५ किलोमिटर रहेको छ । यसले ५ हजारदेखि ५५ सय आरपीएम मा ११० पीएसको अधिकतम पावर र १ हजार ७५० देखि ४ हजार आरपीएम मा १७५ एनएम को अधिकतम टर्क उत्पन्न गर्न सक्छ ।
यस बाहेक १८.९७ किलोमिटर माइजेजको साथ ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनसंग जोडिएको हुन्छ । यसको अघिल्लो इन्जिनको तुलनामा टीएसआईले इन्धन दक्षता वृद्धि, सुधारिएको कार्यसम्पादन फिगर प्रदान गर्दछ ।
यसमा कार्टजकट एलइडी डीआरएस प्रोजेक्ट, अटोमेटिक हेडलाइट सिस्टमका साथै लाइट सेन्सर, अटो डाइमिङ रियर भ्यू मिरर, क्रुज कन्ट्रोल लगायतका अन्य उत्कृष्ट फिचर्सहरु रहेका छन् ।
स्कोडा र्यापिड टीएसआइ ३४ लाख ९० हजारदेखि ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यका रहेका छन् । यो व्रिलियन्ट सिल्भर, क्यान्डी ह्वाइट, कार्बन स्टील र टफी ब्राउन कलरमा उपलब्ध रहेको छ ।
कुन मोडेलको कति मूल्य ?
९८ रेन्जमा सिमकार्ड सकिएसँगै ९७ मार्फत् जीएसएम सेवा दिँदै टेलिकम
नेपाल अन्लाईन पत्रिका - सोमवार, कार्तिक २९, २०७८ १:१२
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लिमिटेडले ९८ रेञ्जमा सिमकार्ड सकिएसँगै ९७ मा आधारित भएर जीएसएम सिमकार्ड बिक्री सुरु गरेको छ ।
टिकटक भिडियो बनाएर यसरी जित्नुस कार देखि मोबाइलसम्म !
सविना गौतम - शुक्रबार, कार्तिक २६, २०७८ १०:०२
शिखर नेपाल प्रा.लि.को मुख्य आयोजनामा हुने ‘शिखर टिकटक स्टार नेपाल रियालिटी सो’ को घोषणा भएको छ । जसअन्तर्गत पछिल्लो समयको चर्चित भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमा भिडियो बनाएर कार, मोटर साइकलसहितका उपहार जित्ने सकिने छ ।
६४९ रूपैयाँमै सिजीनेटको ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट
नेपाल अन्लाईन पत्रिका - मङ्लबार, कार्तिक २३, २०७८ १०:२९
क महिने प्याकेज लिने ग्राहकलाई निःशुल्क जडान र ड्रप वायर वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै तीन महिनाको प्याकेजअन्तर्गत १९ सय ४७ रुपैयाँमा ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने ६ महिनाको शुल्क तीन हजार ८९४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
अब २९४ रुपैयाँमा नेपाल टेलिकमको २० जीबी डेटा
नेपाल अन्लाईन पत्रिका - आइतवार, कार्तिक २१, २०७८ १०:२६
यस योजना अन्तर्गत दुई सय ९४ रुपैयाँमा १० दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने २० जीबी डेटा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै तीन दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ६ जीबी डेटा ९८ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ ।